miresaka amin’ny olona an-tserasera
Ao amin’ny tontolo virtoaly»mifanerasera amin’ny olona an-tserasera,»ny zavatra rehetra dia mandehana fotsiny ny fomba tianao. Nametraka ny torolalana ho an’ny fiainana ny toetra amam-panahy (araka ny fomba, toetra amam-panahy ny famoronana amin’ny aterineto ity no dingana voalohany amin’ny lalao). Eto izany dia azo atao ny manao ny hampisy ny dihy ao ny alina club, mitondra fiara amin’ny tanàna ny amin’ny hantsana ilay fiara mba hanorina ho anao ny nofy an-trano na manova tanteraka ny mankaleo tarehy. Misy faniriana izany dia ny tsy miraharaha ny tena zava-misy izao tontolo izao, dia mety ho mora vahana miaraka amin’ny fanampian’ny ity mahaliana lalao ho an’ny ankizivavy.
Eto dia afaka hiresaka an-tserasera, dia mitadiava namana vaovao, ary na dia ny mahita tia
Ireo lalao ho an’ny zazavavy dia hamela anao mba hiaina rehetra ny fifaliana avy amin ny namana, fifandraisana, fitantanana sy ny lazany.
Mazava ho azy, ny toetra tokony ho nikarakara, manatanteraka izay rehetra nilainy.
Isan-karazany ny fiainana»virtuoso»ao amin’ny lalao toerana dia maro ny fahafahana
Toeram-pivarotana, salons hatsaran-tarehy, ary ny hafa ilaina amin’ny andrim-panjakana izay rehetra manampy mba hitazonana ny toetra amam-panahy sy ny toe-po tsara mba hamaly ny faniriany. Azonao atao mihitsy aza manana biby, olona maro no toy izany.
Isaky ny toetra amam-panahy ao amin’ny lalao ho an’ny vehivavy»Hiresaka amin’ny olona an-tserasera»manana ny ampy izay dia miankina amin’ny lafin-javatra samihafa: fahasalamana, toe-po, ny fitafiana, ny isan’ny namana. Ho an’ny mpandray anjara amin’ny lalao foana nanatontosa fifaninanana, ny fandresena izay manatsara sata ara-tsosialy sy manome ny fidirana ho any amin’ny vato nasondrotry ny lalao. Avo rating mamela anao mba ho raitra ny antoko sy amin’ny andrim-panjakana malaza, sy ny maro hafa dia zavatra mahafinaritra. Noho izany, ny simulation ny fiainana ao an-tanàna dia mamela anao ho tonga fahombiazana ao amin’ny tontolo virtoaly ny olona.
Raha fintinina, ny lalao afaka manatanteraka na inona na inona ny faniriana
Izany no tsara io anjara lalao maimaim-poana amin’ny aterineto ity ny zavatra rehetra dia azo atao
Izay mianatra ny ho vady ny ny tsara indrindra ny vehivavy. (Ny olona, ny fifandraisana, ny hihaona olona vaovao) →